Jamaica Oo Dooneysa Inay Wiilkooda Greenwood Kasoo Wareejiso Xulka Ingiriiska – Garsoore Sports
Jamaica Oo Dooneysa…
Jamaica ayaa rajeyneysa inay ku qanciso weeraryahanka Manchester United Mason Greenwood inuu diido mustaqbal caalami ah oo uu la yeesho xulka Ingiriiska beddelkeedana uu u cayaaro waddankii uu asal ka yimid.
Xulka Jamaica waxay howlgal addag ku ugaarsanayeen cayaartoydooda labada dhalasho heysta, isagoo dhowaan ku qanciyay weeraryahanka West Ham United Michail Antonio inuu u cayaaro xulka Jamaica heerka caalami xilli ay horey u oo bandhigeen inay qanciyeen Ravel Morrison, Andre Gray iyo Bobby Reid.
Sida ay qortay Thr Telegraph, rajadooda xigta waa in ay ku qanciyaan weeraryahanka kooxda Manchester United Mason Greenwood oo heysta dhalashada Ingiriiska inuu kasoo weecdo dhan – ilo wareedyo sar-sare oo ka tirsan Xiriirka Kubadda Cagta ee Jamaica ayaa caddeeyay in albaabka uu mar walba u furan yahay da ’yarta United.
Greenwood durbaba waxa uu u cayaaray Ingiriiska – September 2020 kulankii ay 1-0 kaga badiyeen Iceland – laakiin ciyaartooyda da’doodu ka yar tahay 21 sano ayaa loo oggol yahay inay ukala wareegaan xulalka heerka caalami haddii ay ciyaareen wax ka yar seddex kulan oo heer caalami ah, taasoo la micno ah in Greenwood uu weli u wareegi karo Jamaica oo ah halka uu asal ahaan kasoo jeedo.
Ma jirto wax tilmaamaya in Greenwood uu Jamaica ka aqbali doono dalabkooda. Wuxuu matalayay xulka Ingiriiska cayaartooyda da’doodu ka hooseyso 17-jirada, 18-jirada iyo 21-jirada kahor inta uusan cayaarin kulankiisii ugu horreeyay ee kooxd waaweyn, wuxuuna noqday xiddigii 7-aad ee Man United ah oo safta kulankiisii ugu horreeyay ee Ingiriisja isagoo dhalinyaro ah.
Greenwood waa ciyaaryahanka ugu sarreeya ee ay bartilmaameedsadeen FA-ga Jamaicanka, kuwaasoo raadinaya inay dhisaan koox xoog leh kahor inta aysan bilaabin ololahooda ay ugu soo baxayaan Koobka Adduunka ee 2022 dabayaaqada sannadkan.
Tababarihii Netherlands Oo Shaqada Iska Casilay